के तपाइको कुण्डलीमा शनिको दोष छ ? यसरी मेटाउन सकिन्छ शनिको दोष…
के तपाईंलाई शनिको महादशाले सताईरहेको छ ? मिलेको काम पनि बिग्रन्छ ? त्यसोभए कुण्डलीमा शनिको दोष भएको हुनसक्छ।
शनि बिध्न र बाधाको देब हुन्। यदि कुण्डलीमा शनि खराब छ भने जिवनमा समस्या पर्छ र सुख-शान्ति मिल्दैन। बन्न लागेका पनि सबै काम बिग्रन्छन् र कुनै पनि उपायले समाधान हुदैनन्। तर नडराउनुस किनकि गणेशजीसंग छ सबै समस्याको समाधान। शनिको महादशाका सबै बिघ्न र बाध गणेशजीले हटाईदिनुहुनेछ। त्यसैले ढिला नगर्नुस् गणेशजीलाई प्रशन्न गर्नुस् र माग्नुस गणेशजीसँग शनि शान्तिको बरदान। गणेशजीको नामले शनि दशाबाट मुक्ति पाइन्छ र शनि दोष मेटिन्छ। सबै दुख तथा समस्या सुल्झेर जिवनमा खुशी छाउनेछ।
कसरी गणेशजीले शनिलाई मनाउनु हुन्छ ? के सम्बन्ध छ गणेशजी र शनि देबको ? आज हामी तपाइलाई यसबारे बताउनेछौ:
– शनि बिघ्न र बाधाको देवता हुन् भने गणेशजी बिघ्न बिनाशक देवता हुन्।
– शनि देब शिवजीको शिष्य हुन र गणेशजी छोरा हुन्।
– शनि न्यायका देवता हुन सजाय दिन्छन् र जीवनलाई कष्टकर बनाई दिन्छन्, गणेशजी आफ्नो भक्तहरुलाई सुख शान्ति र सम्वृद्धि दिनुहुन्छ।
त्यसैले जोतीषको जानकारीको अनुसार कुण्डलीमा जोडिएका सबै शनिका दोषहरु गणेशजीको पुजाआजा गर्नाले टाढा हुन्छ्न।
बिरलैलाई मात्र यसले लाभ गर्छ । त्यसैले शनिको साढे सात दशाको दाेष निवारण गर्न विभिन्न शास्त्रीय विधि अपनाउनुपर्छ । यदि तपाईमा पनि साढे सातको दशा चलेको छ भने त्यसको दोष देखिने ज्योतिष शास्त्रीहरु बताउँछन् ।
यदि साढे सातको दशा चलेको छ भने तपाईको जीवन निकै कष्टकर बन्छ । तपाईले चाहेका कुनै पनि काम फत्ते गर्न सक्नुहुन्न । घरमा पनि अनिष्ठ हुन्छ । यस्तो दशाको दोष निवारणका लागि शनिबार पारेर फलामका सामाग्री शनिदेवको मन्दिरमा चढाउनुपर्छ ।
यसबाट शनिको दशाबाट मुक्ति मिल्छ । यस बाहेक राशि अनुसारका निम्न उपाय गरेमा पनि शनिको साढे सातको दशाबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ ।
मेष राशिमा शनिको साढे सातको समस्या देखा परेमा अरुको भरमा पर्ने काममा पनि आफै अग्रसर हुन आवश्यक छ । यस बेलामा कामको तनाव र चिन्ता बढि हुने भएकाले कुनै पनि निर्णय लिन हतार गर्नु हुँदैन । कुनै कारोबार वा महंगो वस्तु लिनुपूर्व निकै सोचविचार गर्नुपर्दछ ।
वृष राशिको व्ययवृद्धिको नियन्त्रण अरुमा निर्भर हुन्छ । तसर्थ कुनै कुराको थालनी पूर्व आफन्त वा विश्वासी नाताका मानिससंग सल्लाह लिनु आवश्यक हुन्छ । जोखिमयुक्त कामको थालनी गर्दा भावनामा रहेर गर्नु हुँदैन अन्यथा यसको नकारात्मक असर देखापर्न सक्छ ।
मिथुन राशिका व्यक्तिमा साढे सातको समस्या भए तन्त्रमन्त्रमा रुचि बढ्ने गर्दछ । धार्मिक स्थल वा तिर्थको योग हुनसक्छ । त्यसैले धर्म प्रति नकारात्मक हुँनुहुँदैन । आर्थिक विषयमा विचार विमर्श गर्नु लाभकारी हुन्छ । सेवा वा दानको काम गरेर पनि शनिको साढे सातबाट मुक्ति पाइन्छ ।
कर्कट राशिका व्यक्तिमा शनिको प्रभाव भएमा धर्मस्थलको यात्रा दर्शनको सुयोग बन्दछ । यसरी यात्रा जुरेमा त्यसलाई निन्दा गर्नु हुँदैन । साथै प्रभावशाली व्यक्तिको सहयोगमा मार्गदर्शन लिएमा मात्र शनिको प्रभाव कम हुने र धन प्राप्तिको योग बन्ने हुन्छ ।
सिंह राशिका व्यक्तिमा शनिको प्रभावले स्वास्थ्यमा समस्या देखापर्न सक्छ । काम गर्दा बिग्रने हुनसक्छ । तर यस्तो बेलमा सुझबुझका साथ हतार र लापरबाही नगरी निर्णय लिनु पर्दछ । कुनै पनि वाहनको प्रयोग गर्दा सावधानी अपनाउनुपर्छ ।
कन्या राशिका व्यक्तिमा शनिको व्यक्ति सातको प्रभाव भएमा यसले कतिपय अवस्थामा लाभ गराउन सक्छ । ठूला समस्याको समाधान समेत हुनसक्छ । विवाहका लागि प्रस्ताव आउन सक्छ । तर कन्या राशिको चञ्चलताका कारणले राम्रो योग गुमेर पनि समस्या बल्झिन सक्छ ।
तुला राशिका व्यक्तिमा शनिको प्रभाव देखा परेमा यसले बनेका काम बिर्गाने तथा प्राप्त धन समेत हातबाट फुत्कने हुनसक्छ । कुनै काम गर्दा अनायासै बाधा हुने र अवसर गुम्न सक्छ । तर कतिपय अवस्थामा मित्र र नाताका व्यक्तिको साथले धनवृद्धि र अवसर प्राप्ती समेत हुनसक्छ ।
वृश्चिक राशिका व्यक्तिमा शनिको व्यक्ति सातको प्रभाव देखा परेमा मांगलिक कार्यको आयोजन हुनसक्छ । मानसिकतामा रचनात्मक तथा बौद्धिक कार्य गर्ने विचार आए पनि यसमा अपजस तथा अवरोध खेप्नुपर्छ । तर विस्तारै यो समस्या आफै हटेर जानेछ ।
धनु राशिलाई शनिको व्यक्ति सातको प्रभावले खराब समाचार सुनाउन सक्छ । मेहनत अनुसारको फल पाउन सकिदैन । अरुले शंका गर्ने गर्दछन् । नसोचेको स्थानबाट पनि विवाद झेल्नु पर्ने हुनसक्छ । धनहानि हुन्छ । तर नियमित शनिदेवको आरधना गरे तुरुन्तै मुक्ति पाउन सकिन्छ ।
व्यक्ति सातको प्रभावमा मकर राशिका व्यक्तिलाई केहि फाइदा हुनसक्छ । नाताका व्यक्तिबाट राम्रो सहयोग पाउन सकिन्छ । तर कुनै पनि ठुलो निर्णय लिनु पूर्व जोखिम अनुसार जानकार व्यक्तिबाट सहयोग वा सुझाव लिनु पर्दछ । अन्यथा राम्रो अवसर पनि गुमेर जानसक्छ ।
कुम्भ राशिका व्यक्तिमा शनिको सातको प्रभावले राम्रा व्यक्तिसँग भेट र सम्बन्ध बनाउने योग हुन्छ । यसले राम्रो आम्दानी हुने तथा मनोरञ्जनात्मक काममा साथ दिएमा पनि सफलता पाउने बेलामा भने खुट्टा तान्नेहरु सक्रिय बनाउने गर्दछ । तसर्थ शनिलाई प्रसन्न गराउनु आवश्यक हुन्छ ।
मीन राशिका व्यक्तिमा शनिको सातको प्रभावले अप्रत्याशित लाभको अवसर जुराउँछ । तर लगातारको कामबाट हुने आर्थिक उन्नतिमा भने बाधा हुनसक्छ । भाग्य अनुकूलता नभएमा जस्तो मेहनत गरेमा पनि बनेको काम गुम्न सक्छ । तर मेहनत छाड्नु भने हुँदैन, पछि यसले लाभ दिन्छ ।